पचिराको हेरचाह कसरी गर्ने ? | सबै रूखहरू
पातलो फल रूखहरू
सदाबहार फलफूलका रूखहरू
झाडी र रूख बिरुवाहरू
स्पेनमा आक्रामक रूखहरू
पचिरा (पचिरा एक्वाटिका)
मोनिका सान्चेज | 09/05/2022 10:33 | फल रूखहरू, सदाबहार फलफूलका रूखहरू
छवि - फ्लिकर / रोबर्टो क्यास्ट्रो-कोर्टेस
पचिरा एक उष्णकटिबंधीय रूख हो जुन स्पेनमा हामी सामान्यतया घर भित्र बढ्छौं, यसको चिसो प्रतिरोधको कमीको कारण। यद्यपि, यो जान्न महत्त्वपूर्ण छ कि यो एक बिरुवा हो जुन उचाइमा दस मिटर भन्दा बढी हुन सक्छ, त्यसैले यदि हामी यसलाई घरमा राख्न चाहन्छौं भने, यदि हामी यसलाई छतमा छुन चाहँदैनौं भने हामी यसलाई काट्न बाध्य हुनेछौं।
तर जब हावापानी उष्णकटिबंधीय हुन्छ, अर्थात् वर्षभरि न्यानो हुन्छ, यो बाहिरी ठाउँमा, बगैंचामा रोप्नु बढी रोचक हुन्छ किनकि यो भाँडोमा बस्न मनपर्ने रूख होइन।
1 पचिरा भनेको के हो ?
2 यो के प्रयोग गरीन्छ?
3 पचिरा एक्वाटिकाको हेरचाह के हो?
3.1 पचिरा कहाँ राख्ने ?
3.2 पचिरालाई कसरी पानी हालिन्छ?
3.3 यसलाई भाँडोमा राख्नु पर्छ कि जमिनमा?
3.4 तपाइँलाई कुन जग्गा चाहिन्छ?
3.5 कुन भाँडो सबैभन्दा उपयुक्त छ?
3.6 पचिरा कहिले प्रत्यारोपण गर्नुपर्छ?
3.7 यो कहिले र कसरी काटिन्छ?
4 पचिरा एक्वाटिकामा लाग्ने रोगहरु के के हुन् ?
पचिरा भनेको के हो ?
छवि - विकिमेडिया / मौरोगुआनन्दि
पचिरा, जसलाई गुयाना चेस्टनट पनि भनिन्छ, मध्य अमेरिकादेखि उत्तरी दक्षिण अमेरिकासम्मको सदाबहार रूख हो। यो 20 मिटरको उचाइमा पुग्छ, र4र5मिटर चौडाइको बीचमा घना चन्दवाको विकास गर्दछ। 5-9 हरियो पातहरू र छालाको बनावटको साथ पामेट पातहरू मिलेर बनेको।
यसका फूलहरू पहेंलो र गुलाबी हुन्छन्, र लगभग 30 देखि 35 सेन्टिमिटर लामो नाप्न सक्छन्। एक पटक तिनीहरू परागकित भएपछि, फलहरू, जुन कडा खैरो क्याप्सुलको रूपमा समाप्त हुनेछ, पाक्न थाल्छ। बीउहरू गोलाकार, खैरो र 1-1.5 सेन्टिमिटर लामो हुन्छन्।
यो के प्रयोग गरीन्छ?
अमरूद चेस्टनट सजावटी बोटको रूपमा प्रयोग, घर भित्र र बाहिर दुवै। चिसो वा शीतोष्ण मौसममा, यो सबैभन्दा मनपर्ने इनडोर रूखहरू मध्ये एक हो, किनकि यसको विशाल पातहरूले कुनै पनि कोठामा उष्णकटिबंधीय स्पर्श थप्छ। तर, तपाईलाई थाहा थिएन कि यसको अन्य उपयोगहरू छन्?
फलफूल काँचै खान सकिन्छ ।, रूखबाट ताजा छनोट गरिएको, वा राम्रोसँग पकाइएको। तिनीहरूले प्रयास गर्ने अवसर पाएकाहरू भन्छन् कि तिनीहरूको स्वाद मूंगफली जस्तै छ। थप रूपमा, तिनीहरू पनि पीठो बनाउनको लागि भुइँमा छन्, जुन रोटी बनाउन प्रयोग गरिन्छ।
अन्तिम तर कम्तिमा होइन, एक जिज्ञासाको रूपमा तपाईंले त्यो जान्नुपर्छ यो मेक्सिकोमा संरक्षित प्रजाति हो.
के हेरविचार छन् पचिरा एक्वाटिका?
पचिरा एक विदेशी, उष्णकटिबंधीय रूख हो जसलाई सुन्दर हुन न्यूनतम हेरचाह चाहिन्छ। यस कारणको लागि, हामी कुनलाई व्याख्या गर्न जाँदैछौं ताकि तपाईले यसलाई लामो समयसम्म राख्न सक्नुहुन्छ:
पचिरा कहाँ राख्ने ?
त्यो प्रश्नको जवाफ हाम्रो क्षेत्रको मौसममा निर्भर हुनेछ। उष्णकटिबंधीय भएकोले, यो चिसोको लागि धेरै संवेदनशील छ, त्यसैले यदि तापमान 15ºC भन्दा तल झर्यो भने, हामीले यसलाई घर भित्रै राख्नुपर्छ, कम्तिमा जाडोमा, यद्यपि यो वर्षभरि सम्भव छ। यो कोठामा राखिनेछ जहाँ धेरै प्रकाश छ, ड्राफ्ट बिना, र उच्च परिवेश वा सापेक्षिक आर्द्रता संग; यदि यो कम छ, अर्थात्, यदि यो 50% भन्दा कम छ भने, पातहरू दैनिक पानीको साथ स्प्रे गर्नुपर्छ।
तर यदि तापक्रम सँधै 15ºC माथि रहन्छ भने, हामी यसलाई बाहिर लैजान सक्छौं, उदाहरणका लागि आँगन वा टेरेसमा, वा अझ राम्रो, बगैंचामा, जहाँ यो पृथक नमूनाको रूपमा राम्रो देखिन्छ, घमाइलो क्षेत्रमा।
पचिरालाई कसरी पानी हालिन्छ?
छवि - विकिमेडिया / वन र किम स्टारर
यद्यपि यसको अन्तिम नाम "एक्वाटिका" हो, जब हावापानी समशीतोष्ण हुन्छ हामी यसलाई जलीय बिरुवा जस्तो व्यवहार गर्न सक्दैनौं, किनकि यदि हामीले त्यसलाई चाँडै गुमाउनेछौं। तर, हामीले पृथ्वीलाई अलिकति सुकाउन दिनुपर्छ फेरि पानी हाल्नु अघि।
तसर्थ, म गर्मीमा हरेक 2-4 दिनमा पानी दिन सल्लाह दिन्छु, र जाडोमा कम। कुनै पनि अवस्थामा, यदि तपाइँसँग शंका छ भने, यो राम्रो छ कि तपाइँ केहि दिन बितिसक्दा सम्म पानी नदिनुहोस्। यदि तपाइँ यसलाई भाँडोमा राख्नुहुन्छ भने, तपाइँ यसलाई पानी दिएपछि लिनुभएमा धेरै पानी चाहिन्छ कि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ, र केहि दिन पछि फेरि, किनकि माटो भिजेको भन्दा सुख्खा हुँदा धेरै कम हुन्छ।
यसलाई भाँडोमा राख्नु पर्छ कि जमिनमा?
फेरि, यो हामीले उब्जाउने ठाउँको तापक्रममा निर्भर गर्दछ, साथै हामीसँग बगैंचा छ वा छैन। 20 मिटर उचाइ मापन गर्न सक्ने रूखको मामलामा, जति सक्दो चाँडो जमिनमा रोप्नु सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ, तर यो मात्र व्यवहार्य छ यदि जलवायु उष्णकटिबंधीय छ।, त्यो हो, यदि त्यहाँ कहिल्यै फ्रस्ट छैन र तापमान उच्च छ, 15ºC माथि।
बाँकी मामिलाहरूमा, यो स्पेनको ठूलो भागमा उदाहरणका लागि हुन्छ, हामीसँग भाँडोमा पचिरा हुनुको विकल्प छैन।। अब केही महिना मात्रै भए पनि बगैँचामा रमाइलो गर्न चाहन्छौँ भने जमिनमा भाँडो लगाएर जाडो लागेपछि निकाल्न सक्छौँ ।
तपाइँलाई कुन जग्गा चाहिन्छ?
पचिरा उर्वर भूमि चाहिन्छ, रमाईलो र प्रकाश। तसर्थ, यदि यो भाँडोमा हुन गइरहेको छ भने, यसमा राम्रो गुणस्तरको सब्सट्रेटहरू राख्नु पर्छ, जुन परम्परागत भन्दा थोरै महँगो भए तापनि हाम्रो बोटलाई राम्रो स्वास्थ्यमा बढ्न मद्दत गर्दछ। उदाहरणका लागि, हामीसँग ब्रान्डहरू छन् BioBizz, फर्टिबेरिया o फूल, जसले धेरै, धेरै राम्रो सब्सट्रेटहरू उत्पादन गर्दछ, जुन सजिलै जलमग्न हुँदैन र जसले जराहरूलाई सामान्य रूपमा विकास गर्न अनुमति दिन्छ।
यदि तपाईं बगैंचामा जाँदै हुनुहुन्छ भने, जैविक पदार्थले भरिपूर्ण माटोमा रोप्नु पर्छ, र तिनीहरूसँग राम्रो जल निकासी छ ताकि पानी चाँडै अवशोषित हुन्छ।
कुन भाँडो सबैभन्दा उपयुक्त छ?
कुनै पनि चीज जसको आधारमा प्वालहरू छन् र तपाईंसँग अहिले रहेको भन्दा लगभग5देखि 10 सेन्टिमिटर ठूलो छ।। यो बनाइएको सामग्रीले धेरै फरक पार्दैन, किनकि यो प्लास्टिक वा माटो हो, पचिरा सिद्ध हुन सक्छ, यद्यपि यो सत्य हो कि यदि यो माटोले बनेको छ भने, जराले राम्रोसँग "समाप्त" गर्न सक्षम हुनेछ, केहि कि यसले वृद्धिलाई असर गर्छ तर तपाईले वास्तवमै नाङ्गो आँखाले धेरै देख्नुहुन्न जबसम्म तपाईले यसलाई प्लास्टिकमा बढिरहेको अर्कोसँग तुलना गर्न सक्नुहुन्न।
पचिरा कहिले प्रत्यारोपण गर्नुपर्छ?
यदि यो कुमालेको छ भने, यो वसन्त भएसम्म किने बित्तिकै गरिन्छ, र प्रत्येक पटक ड्रेनेज प्वालहरूबाट जरा बाहिर आउँदा हामी यसलाई फेरि गर्नेछौं। र यदि हामी यसलाई बगैंचामा रोप्न चाहन्छौं भने, हामी यसलाई वसन्त-गर्मीमा गर्नेछौं, जब तापमान न्यूनतम 18ºC भन्दा बढी हुन्छ।
यो कहिले र कसरी काटिन्छ?
छवि - विकिमीडिया/डीसी
यदि हामीले यसलाई जीवनभर भाँडोमा राख्ने हो भने, चाहेको कारणले वा हामीसँग जाडोमा बाँच्नको लागि यसलाई घरभित्र राख्नु बाहेक अर्को विकल्प छैन भने, हामीले यसलाई समय-समयमा छाँट्नु पर्छ। समय, वसन्त मा। जबसम्म ऊ जवान छ र 1-5 मिटर भन्दा बढी अग्लो छैन, यो उसलाई केहि गर्न आवश्यक हुनेछैन। तर जब त्यो उचाइ नाघ्न थाल्छ, म हाँगाहरू पिन्च गर्न सल्लाह दिन्छु।
पिन्चिङ एक प्रकारको छाँट्ने काम हो जसमा सबैभन्दा नयाँ पातहरू हटाउने समावेश हुन्छ। यसले बिरुवाको शाखा बढाउँछ। र एकचोटि ती हाँगाहरूले आफ्नो विकास समाप्त गरेपछि, हामी मुकुटको आकार दिन सुरु गर्न सक्छौं, तिनीहरूलाई ट्रिम गर्न सक्छौं ताकि यो प्राकृतिक देखिन्छ, थोरै गोलाकार आकारको साथ।
जे होस्, धैर्य गर्नुपर्छ। एक पटकमा थोरै छाँट्नु सधैं राम्रो हुनेछ, एकै बैठकमा सम्पूर्ण हाँगाहरू हटाउनु भन्दा, किनभने पछिल्लो अवस्थामा बिरुवा गुमाउने जोखिम हुन्छ।
कस्ता रोगहरु छन् पचिरा एक्वाटिका?
यो बिरुवा होइन जुन सामान्यतया बिरामी हुन्छ, यदि आवश्यक भन्दा बढी पानी दिइयो भने बाहेक, यस्तो अवस्थामा, माटो धेरै भिजेको र धेरै लामो समयसम्म, रोगजनक कवकले जरा सड्ने जस्ता धेरै क्षति पुर्‍याउन सक्छ। र/वा पातहरूमा खैरो दागहरू। यदि यो रोगी हुन सक्छ, वा यसलाई अत्यधिक पानी हालेको शंका छ भने, हामी प्रणालीगत फङ्गिसाइड स्प्रे लागू गर्न सिफारिस गर्छौं। सकेसम्म चाँडो, तपाईंको स्वास्थ्य खराब हुनबाट रोक्नको लागि। साथै, यसलाई कम पटक पानी दिनुपर्छ।
अहिले, हो किट लाग्न सक्छ, जस्तै स्पाइडर माइट्स, aphids र mealybugs, विशेष गरी कपास mealybug। हामीले यी पातहरूको मुनिमा भेट्टाउनेछौं, तर हामीले तिनीहरूलाई पानी र तटस्थ साबुन वा कुनै विशेष कीटनाशक वा एकेरिसाइडले सफा गरेर हटाउन सक्छौं।
पचिरालाई कस्तो लाग्यो ?
लेखको पूर्ण मार्ग: सबै रूखहरू » फिचस » फल रूखहरू » सदाबहार फलफूलका रूखहरू » पचिरा (पचिरा एक्वाटिका)
यूरोपीयन मेडलर (मेस्पिलस जर्मनिका)
छाया केरा (प्लाटनस हिस्पानिका)